विवाह भएको चार वर्ष भयो तर बच्चा हुन सकेको छैन किन होला ?
मंसिर १७, २०७४ सोमवार ०१:४४:५१ प्रकाशित
हाम्रो विवाह भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । परिवार नियोजनको साधन पनि प्रयोग गरेकी छैन । तर बच्चा हुन सकेको छैन । के कारणले यस्तो हुन्छ ? - एस
परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगर्ने स्वस्थ दम्पत्तिमध्ये ८० प्रतिशतको विवाह भएको दुई वर्षमा सन्तान हुन्छन् । त्यसअवधिमा २० प्रतिशत दम्पत्तिका सन्तान नहुन सक्छन् । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । यदि श्रीमानको पिसाबसम्बन्धी रोग थियो वा पिसाबमा संक्रमण छ कि ? पुरुषमा शुक्रकीटको अभावले पनि यस्तो हुन सक्छ । त्यसकारण एकपटक शुक्रकीट जाँच गर्नुहोला । तपाईको महिनावारी समयमा नहुने समस्या छ भने पनि यस्तो हुन सक्छ ।
वीर्यनलीमा विभिन्न कारणले अवरोध आएको हुन सक्छ। वीर्यनलीमा संक्रमणका कारण अवरोध आएको हुन सक्छ भने केहीमा जन्मजात वीर्यनलीमा अवरोध हुन्छ। केही व्यक्तिमा भने शल्याक्रियाका कारण पनि यस्तो समस्या देखिन्छ। विभिन्न समस्याका कारण लिंगको शल्यक्रिया गरिएको छ भने पछि गएर त्यसले वीर्य निस्किने नलीमा नै अवरोध ल्याउन सक्छ।
यसका साथै महिलामा वीज ग्रन्थीको खराबीले गर्दा स्त्रीबीज (अण्ड) ननिस्कनु, वीजवाहिनी नलीहरुमा केही अवरोध हुनु, गर्भाशयको मुख ज्यादै सानो हुनु, गर्भाशय ज्यादै सानो हुनु अथवा दुई कोठामा बाँडिनु, योनिश्राव धेरै निस्कनु जसको अमिलोपनामा हटाएर शुक्रकीट मर्नु लगायतका कारणले पनि हुनसक्छ । आत्तिहाल्नु पर्दैन । एक पटक विशेषज्ञको सल्लाह लिनु होला । सामान्य उपचारले पनि बच्चा बस्न सक्छ ।
डा विमल थापा, वरिष्ठ गाइनोलोजिष्ट, सिभिल अस्पताल